1. Thina ke lowo wengcibi yokuluka ngobuchule kunye umenzi ezahlukeneyo mveliso filter engundoqo.
inkampani 2.Our uneminyaka engama-20 yamava kwemveliso kunye nophuhliso, imveliso ye elements lokucoca mveliso unako ukufikelela iiyunithi 2000 ngosuku.
3.With izixhobo banamhla, phantsi ndawo ka ukwenza inkxaso, sihlanganise izixhobo ezikumgangatho ophezulu, xa ikrwada izinto zokuthenga, ukwenza imveliso kunye nomgangatho ogqityiweyo link ukwamkelwa imveliso ukwenza ukuhlangabezana ingenamthungo, phantsi ndawo iimveliso ezikumgangatho isiqinisekiso, ukuqinisekisa ngexesha delivery, unako kwakhona ukunika abathengi amaxabiso kakhulu kukhuphiswano.
iimveliso 4.Our rhoqo ukuqamba, iimveliso ezintsha ezishelfini, iimveliso ezininzi ashushu ziyafumaneka ukuze abathengi ukuba bakhethe iimfuno ezahlukeneyo, Online impendulo ngexesha, unxibelelwano intanethi, kwaye siya kwenza konke okusemandleni ethu ukuze zibonelele ngenkonzo engcono kubathengi.
Iphakheji imveliso 5.Provide ngokwemfuneko loMthengi, ukubonelela ngenkonzo brand yesiko kubathengi.
Inkampani 6.Our unalo unalo iqela lokuthengisa ezikumgangatho ophezulu, iqela kwempahla neenkonzo kunye namaxwebhu, nathi thethwano lorhwebo, indlela emva kwexesha umkhondo kunye namalungiselelo yezothutho link ukuze abe nako ukuphumeza i-docking ingenamthungo, ukubonelela abaxumi inkonzo arcade games in ukuze kuzuzwe.